Tartan iyo Taclin oo weli socda iyo dugsiyo xalayto u soo baxay wareega saddexaad ee Tartanka – Radio Daljir
Luulyo 26, 2013 4:27 b 0
Boosaso, July 26, 2013 – Tartankaan oo xalay galay wareega labaad ayaa waxaa ku tartamay afar dugsi oo ka mid ah 24ka dugsi ee ku yaala deegaanada puntland ee ka qaygalaya barnaamijka, dugsiiga sare? Al-nuur ee ka dhisan magaalada Baran iyo dugsiga sare Goldogob ayaa isku arkay qaybtii koowaad ee tartanka oo xalay lahaa xiiso gaar maadaama uu ahaa habeenkii koowaad ee is reebreebka tartanka oo dugsigii laga badiyaa tartanka uu ka haray.
Labada dugsi ayaa lagu amaanay inay soo bandhigeen tartan xiiso badan oo ay ku dheehantahay asluub iyo aqoon, hase ahaatee waxaa tartanka gabagabadii guusha ay ku raacday dugsiga sare Al-nuur ee Baran oo sidoo kale usoo baxay wareega sadexaad ee tartanka Axmed C/laahi Kaanuu oo guddiga barnaamijka ka mid ayaa nattiijada ku dhawaaqay, waxaana uu sheegay tartanka inuu kusoo dhamaaday sideed darajo iyo sagaal darajo oo guushi ay ku raacday dugsiga Al-Nuur Baran.
Qaybtii labaad ayaa waxaa ku tartamay dugsiyada kala ah Imaamu nawaawi qardho iyo dugsiga Nugaal Secondary Garoowe, tartanka labada dugsi ay soo bandhigeen ayaa ka duwanaa tartamadii hore marka loo eego waqtiga jawaabtu oo ay ku bixinayeen si degdeg ah , hase ahaatee tartanka ayaa noqday gari laba nin kama wada qosliso, waxaana si dirqi ah su’ aal ka faa’iidaysi ah ama hal darajo? ku badiyay dugsiga Nugaal secondary , iyadoo dugsiga Nugaal Secondary uu u soo gudbay wareega sadexaad ee barnaamijka. sida uuu shaaciyay Axmed C/laahi Kaanuu oo ka mid ah guddiga barnaamijka Tartan iyo Tacliin .
Nugaal waxaa ay la timid 11 darajo iyo Imaamu Nawaawi Qardho oo keentay toban darajo.
Caawa ayaa tartamada dugsiyada waxaa ay isku arkayaan sidaan
Al-Azhar Qardho Vs Nawaawi Garoowe
Shaafici Bosaaso Vs Sheekh Axmed Garaar Waaciye.
Tartanka ayaa waxaa maalgalinaya wasaaradda waxbarshada Puntland, shirkadda Golis, salaam bank iyo Raadiyow Daljir oo leh abaabulka iyo baahinta barnaamijka xarumihiisa Geeska Afrika oo dhami.
Wasiiro iyo xilibaano ka tirsan Barlamanka dalka oo ka shiray joojinta dagaalka Marka (Dhegeyso)